It is me. Ko Niknayman.: ပြည်သူ့ အတွက် ကြိုးစားနေကြတဲ့ ဘုန်းဘုန်းများကို ဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ်။
ပြည်သူ့ အတွက် ကြိုးစားနေကြတဲ့ ဘုန်းဘုန်းများကို ဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စတုတ္ထနေ့ကြွချီ။
ယနေ့တွင်လည်း သီရိလင်္ကာရောက်မြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့သည် မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဆို ငြိမ်းချမ်းစွာလမ်းလျှောက်ကြွချီကြသည်မှာ သီဝတမြို့ ကီလိုမီတာ (၃၀)သို့ရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒီနေ့မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်အဖွဲ့ (၁၆)ကီလိုမီတာရှိသော မောရဓူရမြို့ သို့ ကြွချီလျှောက်လှမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဇွဲးမလျှော့ဘဲ ဤကဲ့သို့ဆက်လက် ကြွချီလျှောက်လမ်းသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေ့ရှုလျှက် မေတ္တာဓာတ်များကို လမ်းလျှောက်ရင်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းသို့ ပို့လွှတ်နေကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ မနက် ၅ နာရီးမှာ ပြုလုပ်မြဲဖြစ်တဲ့ ဘုရားအနေကဇာတင်, မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဖတ်, ဂုဏ်တော်ပွား, အမျှဝေ စတဲ့ ကုသိုလ်များကို ကာလုတရမြို့ ဗဟာဗောဓိကျောင်းမှာပြုလုပ်ပြီး, အာရုဏ်ဆွမ်းဘုန်းပေးကြပါတယ်။ ၇ နာရီး ၃၀ မိနစ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ်ကို စတင်နေကြပါပြီ။
Posted by Ko Niknayman at 12:20 PM